Ngatitandare | Nhetembo - Detembai Titandare - Part 11
Ndakagara zvangu ndazviona, Kumiramira, vaiwe muchekadzafa, Nemaziso kuti uri benyumundiro, Kaendwa haudzoki, musiyadzasukwa, Mavara kutaima aiwa eshato. Bva rwagara rudo ibofu, Poshi, piri,…
Takabvira kare kureva sedimikira, Hamuigoni nyika musaivhundukira, Haidyiwe zvemumhanya inozvimbira, Musaijairire mangamanga ibhindura, Imi pachenyu ndimi makaivundura, Zvose zvakanaka mobvumbatira, Zvakaipa kune vamwe…
Rakatanga naMunyebvu, Panopano yava Nyebvu, Tozoona iya, zvayave Nyobvu, Pakazoti gwaro rechishanu? Aah, yanga yangova Nyobvo!
Paye parainyenga raihwarara, Mavara aro achitaima sendarama, Kana iro sadza taiseva neuchi, Nyeredzi matsatse payaturuka, Ndikati ndiyeye wandakarotswa, Chido chemwoyo chandasarudza. Ragarisika, zvino…
Mbudzi ichakarodya nyama! Ndagara ndazviona karekare, Amai vepano nhasi vanatwo, Maroverwe ari kuitwa mwana? Iko kanyama kasina godo, Kamupungurunje kandinodisisa, Nhodzero, mumhu nezviito,…
Tomato so so so-so-so-so Tomato so so so-so-so-so Eriza ge ah ge ah ge-ge-ge-ge Eriza ge ah ge ah ge-ge-ge-ge …
Zvazvo zvingori kutsi kwehope, Ndasuwa kwedu pasichigare, Ndinouya pazororo rino! Tichafara vakoma navazukuru, Paye tichirondedzera chinyakare! Sekuru vagara havana muganhu, Kunyanyanyanya vachinge vakoriva,…